SomaliTalk.com » baaq
Home » Qoraallada Halkudhegga "baaq"
Ururka Puntland Diaspora Forum oo baaq nabadeed u diray dadka reer Gaalkacanyo
Waxaa ururka PDF uu aad uga xunyahay dhiigga dadka walaalaha ah ee ku daatay dagaalkii labada maalmood socday ee ka dhacay xaafado ka mid ah Magaalada Madaxda Gobolka Mudug ee Gaalkacayo. Waxaanu tacsi u diraynaa dhamaan eheladii iyo qaraabadii dadka kaga geeriyooday dhacdadaasi anagoo u rajaynayna samir iyo iimaan inuu Ilaahay ka siiyo. Waxaan dhamaan shacabka walaalaha ah ee reer Puntland xusuusinaynaa...
Baaq nabadeed ay soo saareen Beesha Cali Ibraahiim (Reer Bicidyahan).
Shir aan caadi aheyn oo ay isugu yimaadeen Beelaha Cali Ibrahim (Reer Bicidyahan) oo ay ka soo qayb galeen qaybo ka mid ah Isimad, aqoonyahanada, odayaasha, dhallinyarada iyo ganacsatada ayaa waxaa looga hadley dagaaladdi lagu hoobtey ee ka dhacey Galkayo maalmihii la soo dhaafey. Shirkaan oo ka dhacey Magaaladda Galkayo dadbadan oo jooga daafaha adduunkana ay kaga qayb qaateen khadka Teleefoonka...
Baaq Nabadeed:Ugaaska Awrtable oo baaq u jeediyey dirirta Gaalkacanyo
Ugaas Cumar Geelle Maxamed ayaa ka codsanaya waxgaradka, isimada, culumaaudiinka, haweenka, dhalinyarada ee beelaha walaalaha ee wada dega gobalka Mudug inay si wadajir ah uga qayb qaataan sidii loo joojin lahaa dagaalada ka socda magaalada Gaalkacyo sida ugu dhaqsaha badan. Waa in labada dhinac ay joojiyaan colaada islamarkaana ay ka fogadaan hadalada iyo ficilada dadka sii kale fogeynaya, waxaan...